Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कस्तो अचम्म ! जुत्ताबाटै विद्युत उत्पादन ! - Pnpkhabar.com
कस्तो अचम्म ! जुत्ताबाटै विद्युत उत्पादन !
पिएनपीखबर, भक्तपुर। कुनै काम विशेषले हिँड्दा वा बिहान मर्निङ वाकमा निस्कँदा हाम्रो चाहिने भन्दा बढी मात्रामा अझ भनौ प्रशस्त शक्ति खर्च भैरहेको हुन्छ । त्यही शक्तिलाई स्टोर गर्न सकियो भने विद्युत निकाल्न सकिने एक खोजअनुसन्धानले निचोड निकालेको छ ।
स्वीडेनको इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ एडभान्स मेटरियल संस्थानका प्रोफेसर अजितांशु वेद रत्नमले हाल यस सम्बन्धी पिजो इलेक्ट्रिकल मेटरियलमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
सञ्चारमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै खतिवडा भन्छन्, सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ !